AWS Certification - Sekoly ITS Tech
View ny hovidiana Zahao hoe
Mangataha alalana hiverina?
Raha toa ianao ka olona ary mahita amin'io sehatra io, azafady avelao fotsy.
Saha misy marika * dia ilaina
AfghanistanAlbaniaAlzeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaTendrontany AtsimoAntigua sy BarbudaArzantinaArmeniaao ArubaAostraliaAotrisyAzerbaijanBahamasyBahrainBangladesyBarbadosBelarosiaBelzikaBelizeBeninBermudesBhutanBoliviaBosnia sy HerzegovinaBotsoanaBouvet IslandBrezilaBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBolgariaBorkina FasoBurundiKambodzaKameronaKanadaCape VerdeCayman IslandsRepoblikan'i Afrika AfovoanyTchadShilyShinaKrismasy IslandCocos (Keeling) NosyKolombiaComoresCongoCongo, Repoblika Demokratikan'i TheNosy CookCosta RicaCote D'IvoireKroasia (Antso eo an-toerana: Kroasia)KiobàSipraRepoblika TchekyDanemarkDjiboutiDominicaRepoblika DominikaninaTimor-Leste (Timor atsinanana)EkoateraEjiptaEl SalvadorGinea GineaEritreaEstoniaEthiopiaNosy Falkland (Malvinas)Faroe IslandsFidjiFailandyFrantsaFrance, MetropolitanGuyanePôlinezia frantsayFrench Southern TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGresyGroenlandyGrenadyGoadelopyGuamGuatemalaGineaGuinée-BissauGoianaHaitiHeard sy McDonald IslandsJereo Masina (Vatican City State)HondurasHong KongHongriaIslandyIndiaIndoneziaIran (Repoblika Islamika)IrakIrlandyIsiraelyItaliaJamaikaJapanaJordaniaKazakhstanaKenyaKiribatiKorea, Repoblika Demokratika an'ny vahoakaKorea, Repoblikan'iKoetyKyrgyzstanLao ny Repoblika Demokratikan'i PeopleLetoniaLibanonaLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLitoaniaLuxembourgMacauMakedonia, Repoblika faritanin'i YugoslaviaMadagasikaraMalawiMaleziaMaldivesMaliMaltaNosy MarshallMartiniqueMaoritaniaMaorisyMayotteMeksikaMikronezia, Federated States OfMoldavia, Republic OfMonacoMongoliaMontenegroMontserratMaraokaMozambikaMyanmarNamibiaNauruNepalPays-BasNetherlands AntillesNew CaledoniaNovely zelandyNicaraguaNigerNizeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorvezyOmanPakistanPalauPanamaPapouasie-Nouvelle-GuinéeParaguayPeròFilipinaPitcairnPoloninaPortiogalyPuerto RicoQatarReunionRomaniaFederasiona RosianaRwandaSaint Kitts sy NevisSaint LuciaSaint Vincent sy ny GrenadinesSamoaSan MarinoSao Tome sy PrincipeArabia SaoditaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakia (Slovaky Repoblika)SloveniaNosy SalomonSomaliaAfrika AtsimoSouth Georgia, Nosy Sandwich AtsimoSodàna AtsimoEspainaSri LankaSt. HelenaSt. Pierre sy MiquelonSodànaSurinameNosy Svalbard sy Jan MayenSoazilandySoedaSoisaRepoblika Arabo SyrianaTaiwanTajikistanTanzania, United RepoblikaThailandTogoTokelauTongaTrinidad sy TobagoToniziavorontsilozaTurkmenistanNosy Turks Ary CaicosTuvaluOgandaUkraineEmirà Arabo Mitambatrafanjakana mitambatraEtazoniaUnited States Minor lavitra IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezoelaViet NamVirgin Islands (Britanika)Virgin Islands (US)Wallis sy Futuna IslandsWestern SaharaYemenIogoslaviaZambiaZimbaboe
AWS Purpose & Benefits
Manatsara ny fitomboan'ny asa ary mahazo asa be karama.
Hahazo fahafahana bebe kokoa hanatrarana ny tanjonao ianao.
Fampitomboana avo lenta amin'ny fahaiza-manao matihanina amin'ny IT.
Hamafiso ny fahaiza-manaonao amin'ny teknolojia Virtualization ho an'ny fitomboan'ny fitomboan'ny fitakiana.
Mianara ny AWS ary mitarika ny ho avy.
Ampitomboy ny CV anao mba hahitana tsara kokoa, Ampiharo ny adihevitra momba ny asa tsara sy avo lenta.
Miankina amin'ny AWS (Amazon Web Services) Ny fianarana dia manasongadina ny foto-kevitra ara-teknika amin'ny fananganana fotodrafitrasa AWS. Ny tanjon'izy ireo dia ny mampianatra architects ny fomba ahafahan'izy ireo mampiasa ny AWS cloud amin'ny fampiasana ny serivisy AWS. Ireo mpandray anjara dia hianatra ihany koa ny lamina noforonina sy ny AWS cloud fomba fanao tsara indrindra ho an'ny famolavolana sy fanamafisana ny vahaolana IT (Innovative Technology).
Araho ny fomban-drazana AWS tsara indrindra & toro lalana omena mba handraisana fanapahan-kevitra momba ny fotodrafitrasa.
Manamboatra vahaolana azo itokisana sy azo ekena ho an'ny serivisy AWS.
Ampiharo ireo endri-pahalemana sy fahalemena ao amin'ny fotodrafitrasa IT amin'ny fampiasana ny serivisy AWS.
Manatsara ny vidiny sy manatsara ny fahaizamanao amin'ny famokarana ny vahaolana amin'ny fotodrafitrasan'ny AWS.
Ampiasao ny rafitra tsara tarehy ahafahana manatsara ny rafitra IT amin'ny AWS
Aws Fanofanana Teknika
AWS(Amazon WebServices)Technical Essentials mandeha amin'nyNY(Innovative Technology Solutions) dia mikendry ny hahafantatra ny mpandray anjara amin'ny vokatra, serivisy ary vahaolana iombonanaAmazon WebServices. Manome anao ny fototra ijoroany mba hahomby kokoa amin'ny famantarana ny tolotra Amazon Web Services mba ahafahanao mandray fanapahan-kevitra tsara momba ny vahaolana IT mifototra amin'ny fepetra takian'ny orinasa & manomboka miasa amin'ny AWS.
Mianara mikasika ny foto-kevitra fototra momba ny famolavolana foibe.
Fantaro ireo hevitra sy terminology mifandraika amin'ny sehatra AWS
Mianara mijery sy mampiasa ny AWS Management Console.
Identités et Access Management (IAM) & Ampiharo ny fomba fiasan'ny AWS.
Ampiasao ny tolotra foto-drafitr'asa, anisan'izanyAmazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon VPC (Virtual Private Cloud), Auto Scaling, Elastic Load Balancing (ELB) & Amazon S3 (Simple Storage Service).
Lisitry ny mari-pankasitrahana momba ny AWS
Mianara AWS Course ao Gurgaon. Enroll forFampiofanana AWS any Gurgaon in fampiofanana ambony orinasa "Soloy teknolojia vaovao" ary mahazo AWS certification. Hahazo ny antsipiriany momba ny saram-pianarana, syllabus, ny faharetana, ny fandaharam-potoana.
1 FITORIANA AMIN'NY FAMPIANARANA EZAKA Hijery More
2 FAMPANDROSOANA AWS TECHNICAL ESSENTIALS
Natao ho an'ny Fitakiam-panamboarana
Fepetra mahafeno fepetra mahafeno fepetra mifanaraka amin'ny fepetra fiarovana ara-draharaha mendrika indrindra.
Fanaraha-maso marefo, fanaraha-maso ary mari-pankasitrahana feno filaminana. Nahoana isika no manompo tsara ny mpanjifantsika?
Manangana tranokala hybrid IT izay manitatra ny fotodrafitrasa ao amin'ny tranokala ho an'ny Cloud.